Bazi reMagetsi riri kugadzirira matanho ekuderedza mitengo yepurasitiki yekuisa - "Potato System" magazini
в State, nhau
Pakupera kwaMay, iyo Ministry of Energy, iyo Ministry yezvekurima uye iyo Ministry yeindasitiri neKutengeserana ichagadzira zvirevo zvekutara kwemitengo yezvinhu zvakasvibirira zvinoshandiswa mupolymer kurongedza. Mugove waro mumutengo wekugadzirwa unosvika makumi matatu muzana, uye kwegore mutengo wepakeji wakada kuita zvakapetwa kaviri, rinodaro pepanhau Izvestia.
Vagadziri vechikuru vezvikafu vakashandiswa kubazi rezvekurima muhuwandu pamwe nedambudziko rekukura mumutengo wekurongedza, uyo mukati megore wakasvika 70-80%. Nekuda kweizvi, semuenzaniso, muindasitiri yemukaka, mutengo wekugadzira wakawedzera ne5%.
Vagadziri vanonetsekana kuti kumwe kuwedzera kwemutengo wekurongedza "kuchasanganisira kuwedzera kwemutengo wezvinhu zvakapedzwa uye pakupedzisira zvinokanganisa mitengo yekutengesa yezvinhu zvevatengi."
Bazi rezveMagetsi riri kuongorora zvinoitwa nemaprimers ekutanga pamutengo wekurongedza kubva pachinhu ichi chezvigadzirwa zvekudya. Mugove waro mumutengo wekutakura unogona kusvika ku40%, iro rekudhinda rebasa rakatsanangurirwa kuburitswa.
Izvo zvinodikanwa kudzivirira kuwedzera kwemutengo wemapakeji eiyo agro-maindasitiri akaomarara, kusanganisira ezvokudya uye ekugadzirisa maindasitiri, Ministry of Agriculture yakati. Hushumiro hwasimbisa kuti inoona zvakakosha kuenzanisa kugovera uye kudiwa mumunda wezvinhu zvekurongedza.
Nekudaro, sekureva kwebazi rezvemaindasitiri nekutengeserana, mamiriro ari pamusika wekurongedza mapolymer haazokanganisa zvakanyanya mutengo wezvinhu, nekuti mutengo unofungidzirwa wekutakura mumutengo wezvigadzirwa zvekudya, maererano nedata ravo, angangoita 5%.
Tags: Ministry of Agriculture yeRussian Federationsimuka mumitengo yepolymer kurongedza
Potato yakahwina mubairo wehurumende mubairo kune musayendisiti weKomi
Masayendisiti eRussia anogadzira Y-hutachiona husingabatike mbatatisi